Maakhirtii daacdda ahayd iyo Marabidii miyeey isku milmeen? | allsanaag
Maakhirtii daacdda ahayd iyo Marabidii miyeey isku milmeen?
Ma adiga oo 18 may u dabaal degi jiray ayaad qaaraan i waydiinaysaa?
Haddii qaramada midoobay ay ogaan lahayeen shakhsiyaad ka mid ah Bulshada reer Maakhir, waxay siin lahaayeen abaal marin caalami ah oo Shakhsiyaadkasi ku mutaysteen bani aadanimada iyo isbedel ay ka dhex sameeyeen mujtamaca ay la nool yihiin ama ay ka soo jeedaan.
Burburkii Soomaaliya intii ka danbaysay, guud ahaan degmooyinka gobolka Sanaag waxay ahaayeen kuwo aan Dugsiyada wax lagu bartaa ayna ka xirmin ama ka istaagin, Macalimiinta wax dhigtaana waxay ahaayeen kuwo mar walba helaayey mushahaarkooda . Sidoo kale waxa gobolka laga sameeyey Rugo caafimaad oo dadka jiran lagu daweeyo lacag la’aan ah.
Howlahan oo dhan waxa hormuud ka ahaa oo socodsiinayey Shakhsiyaad la aaminay oo garab ka helayey qurba joogta Reer Maakhir.
Tusaale haddan u soo qaato Gabar ka mid ah qurba joogta reer Maakhir oo aad ugu ololaysa horumarinta waxbarashada dalka Soomaaliya, iyo tan gobolka Sanaag ayaa dhowr sano ka hor waxay soo jeedisay barnaamij ah in ardada ka baxda dugsiyada sare ee gobolka Sanaag loo diro Jaamacadaha dalka, iyada oo laga bixinayo lacagta ay wax ku baranayan, si marka ay soo dhamaystaan ay gobolka ugu soo laabtaan oo ay jiilalka ka danbeeya ay iyaguna wax u baraan iyaga oo guryahooda wada jooga. Arintaas waa laga miro dhaliyey. Maantana Macalimiintii la qaaday oo laga bixiyey lacagtii waxbarashada Caruurtii ay waxbareen, ayaa iyaga oo shahaadooyinka kala duwan diyaarinaya waxay wax ku barabayaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba
Waxa jira Qurba joog kale oo reer Maakhir ah, oo iyaguna u istaagay inay wax ka qabtaan dhinaca caafimaadka, wax badan ka bedelay Isbitaalka Badhameed.
Sidoo kale gobolka Sanaag Waxa ku sugan, Odayaal u taagan nabadda iyo midnimada reer Maakhir, kana dhigay degaankaas midka ugu nabadda iyo xisiloonida badan guud ahaan gobolada Soomaaliya. Waana sababta hadda loogu soo dhiiraday in maalgashi lagu sameeyo gobolka iyo in laga hirgeliyo mashaariic waaweyn sida Jaamacadda Maakhir iyo Jidka ceel Daahir.
Bulshada Reer Maakhir oo aynu kor ku soo xusnay ee u taagnayd horumarinta Bulshada , midnimada, amniga , la dagaalanka argagixisada iyo la noolaanshaha beelaha la deriska ah, iyana waxa jiray koox kale oo ka duwan oo iyaguna ka soo jeeda Maakhir.
Kooxdan danbe ee reer Maakhir , waa kooxda Bisha labaad ee sanad walba bilaabi jiray inay toshaan dhar ay ku xardhan yihiin Calanka SNM, iyaga oo diyaar garoobaya dabaaldega 18 may ee beesha SNM qabsadaan , iyaga oo sheegta inay yihiin dal ka madax baanaan Soomaali inteeda kale, kana maarmay Somaliweyn .
Kooxdan danbe ee Reer Maakhir, waa kooxda afartii sanoba soo kaxaysta Tikinika qoryuhu SNM saaran yihiin , iyaga oo leh diiwaan gelin ayaan gobolka ka hirgelinaynaa ama ku qabanaynaa. Dhowr marna dad ayeey ku dileen diiwaangelintan khasabka ah. Qurba joogta kooxdan taageersani waa kuwa isugu hambalyeeya in Diiwaangelintii SNM ay gobolka Sanaag ka bilaabantay.
Ugu danbayntii kooxdan danbe, ee u dabaal degi jirtay 18 may sanad walba , oo maantana u shaqaynaya Xisbiga Wadani ee SNM, ayaa bilaabay in olole siyaasadeed ka bilaabaan meelaha bulshada reer Maakhir ku kulmaan ee Internetka iyo telefoonada. Kooxdan ayaa iyaga u adeegaya Xisbiga Wadani waxay bilaabeen inay bulshada iska hor keenaan, Iyaga kuwooodii caanka ahaa ay is qarinayaan , hase ahaatee adeegsanayo layli yar oo aan xishoonayn.
Hadaba waxa is waydiin mudan sida aqoonyahankii , siyaasigii iyo waxgardakii gobolak Sanaag ee daacadda ahaa, una taagnaa horumarinta gobolka Sanaag uu maanta u aaminay Qori ismariska u shaqaynaya maamulka SNM. Arintan khatarteeda ayeey leeday yaan lagu milmin Qori ismariska u shaqeeya SNM, oo ujeedadiisu tahay inuu Bulshada kala qaybiyo. Bulshada daacadda ahi waa inay si toos ah ugu sheegeen “Adeer ama Eedo meeshaad ku maqnaan jirtay iska aad noo dhuuman mayside, ” Guul Maakhir
← Daawo Baaqa Beesha uu ka soo jeeday Askarigii dilay Wasiir Siraaji Bosooso oo banaan bax ka dhacay iyo Madaxwayne Gaas oo ku wajahan →